Sekoly plastika namboarina namboarina tany Sina - mpanamboatra - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Home >Products >Fitaovana fanaka plastika>Scru plastika manitatra plug
6 * 30mm plug fanitarana PE
7 * 35mm PE fanitarana PE
Ny vombony amin'ny fantsom-pitaratra dia mety hisoroka ny fantsona fanitarana tsy hihodina sy hampitombo ny fifandirana mandritra ny fametrahana azy. Miaraka amin'ny famolavolana curve fanitarana tonga lafatra, dia manatsara be ny hery mitazona ary manakana tsara ny visy tsy hianjera.
8 * 40mm plug fanitarana PE
7.5 * 38mm plug fanitarana PE
9 * 40mm PE fanitarana PE
FAQ: 1. Manana orinasa misy anao ve ianao? Eny, mpanamboatra ao Shina izahay mandritra ny 10 taona mahery. Ny orinasa misy anay dia any amin'ny faritanin'i Guangdong.2. Ahoana no ahafahako mitsidika ny orinasa misy anao? Pls ampahafantaro anay anay mialoha raha mikasa ny hitsidika ianao. Azonay aseho anao ny lalana na haka anao any amin'ny gara na seranam-piaramanidina.